Change & Development - ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း
ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်လာတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ မတူညီစွာ ယှဉ်ပြိုင်ဦးတည်နေကြသည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အောင်မြင်တဲ့ လူတိုင်းနီးပါး လက်ခံထားတာကတော့ "Change ပြောင်းလဲခြင်း" ရဲ့နောက်မှာ "Change အခွင့်အရေး" ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ Change ပြောင်းလဲမှုယူတဲ့အခါမှာ Bigger Challenge is Bigger Opportunity for Growth (ရင်ဆိုင်စိန်ခေါ်မှု များများယူနိုင်လေလေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတွေက များလာလေလေ ဖြစ်ပါတယ်)။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့ ဦးတည်တဲ့အခါမှာလည်း (Growth - တိုးတက်မှုအဆင့်) ကို အခြေခံတည်ဆောက်ပြီးမှ
(Development - ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်) ကို ရှေ့ရှုဦးတည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အာရုံစိုက်ဖို့လိုတာက လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ
(Size - အရွယ်အစားကြီးဖို့ထက်) လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အလုပ်တွေ၊ ပြီးစီးမှုနှုန်းတွေဟာ
(Speed - သွားနှုန်းမြန်ဖို့သာ) အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
Development - ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အတူ အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကို ဖန်တီးတည်ဆောက် နိုင်စေဖို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) Current လက်ရှိအနေအထားကို သုံးသပ်ခြင်း။ Current analysis and changing decision on strength and threat outlook. လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အနေအထားအားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး အားသာချက်ရှိမှုနဲ့ အဟန့်အတား ဖြစ်စေမှုများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
(၂) Change ပြောင်းလဲခြင်း။ Changes in access to opportunities and resources creation for possibility. ပြောင်းလဲမှုတွင် အခွင့်အလမ်းနဲ့ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်ခံယူပြီး အလားအလာရှိမှုများအပေါ် တီထွင်ဖန်းတီးခြင်း။
(၃) Improvement တိုးတက်ခြင်း။ The changing forward to Management by Objective. ရည်ရွယ်ချက်သို့ စီမံဦးဆောင်မှုဖြင့် ရှေ့သို့ဦးတည်သော ပြောင်းလဲခြင်းများကို ဦးတည်ပုံဖော်ခြင်း။ (၄) Sustainability ရေရှည်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
Innovation on Standard and Sustainability Development Process. ဆန်းသစ်ဖန်တီးမှုများပေါင်းစပ်ပြီး အရည်အသွေး-အဆင့်အတန်းကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့ ထိန်းသိမ်းခြင်း။ လက်ရှိ စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုမှာပဲဖြစ်စေ၊ လူမှုရေးအဆင့်အတန်း ပြောင်းလဲမှုမှာဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု ပြောင်းလဲမှုမှာပဲ ဖြစ်စေ Development အဆင့် (၄-ဆင့်) ဟာ အခြေခံတူညီကြပါ လိမ့်မယ်။ ခေတ်သက္ကရာဇ်တွေ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွေ၊ လူသားတွေ တိုးတက်လာခြင်းမှာ ယခင်နဲ့မတူတဲ့ ပြောင်းလဲ ခြင်းတွေကသာ အခြေခံလာတာမြင်သာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Change and Development ပြောင်းလဲမှ တိုးတက်မည်ဟုဆိုနိုင်သော ယခင်နဲ့ တူညီစေမှုအနေအထားတွေကို ကျော်လွန်ပြီး အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အနာဂတ်အသစ်တွေ၊ ရလဒ်အသစ်တွေ၊ တိုးတက်မှု အသစ်တွေကို ဖန်တီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မျှဝေရေးသားလျှက်။ ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်။
ခေါင်းဆောင်များ၏ ထူးခြားသော လက္ခဏာများ
၁။ ။ အောင်မြင်ရန်အတွက် လိုအင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်း (Strong Desire to Succeed)
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွတ် ပြင်းပြသော လိုအင်ဆန္ဒလိုအပ်သည်ကို သိရှိနားလည်သည်။ စွမ်းအားနှင့် သည်းခံမှုလိုအပ်သည်။ ပြသနာများနှင့်... More
ပြောင်းလဲမှုစီမံခြင်း (၈) ရပ်
ပြောင်းလဲမှုစီမံခြင်းဟာ အမှန်တော့ လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မွေးတဲ့ အချိန်ကစပြီး သေတဲ့အချိန်ထိ ပြောင်းလဲမှုတွေကို စက္ကန့်နဲ့ အမျှရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ရှောင်လို့မရပါဘူး၊ ကြောက်ရွံ့နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ပြောင်းလဲမှုကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ရင်ဆိုင်နိုင်မယ့် သတ္တိတွေ မွေးနိုင်ဖို့သာ အရေးကြီး
7I မဟာဗျူဟာဖြင့် ခေါင်းဆောင်ခြင်း
အောင်မြင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အဲဒီအဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်သူတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု နည်းလမ်းနဲ့ လည်း တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ အခြားသူတွေနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ သူတို့အပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးပြောဆိုနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိမှသာ Tea... More
ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် စေတနာအပြည့်နဲ့ လုပ်ရင် ကိုယ့်ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်မှာပါဆိုတဲ့ ဦးသောင်းစုငြိမ်း (7days News Jornal)
Make Things Happen (မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ)
ဆိုတဲ့ ... ဦးထွန်းထွန်းနိုင် (1876 Hotline and C... More
မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိဈေးကွက်မှာ ယခင် နဲ့ ယခု မတူညီတဲ့ ဈေးကွက်သဘောကတော့ (၀ယ်လိုအား) နဲ့ (ရောင်းလိုအား) အခြေအနေ ပြောင်းလဲလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကဆိုရင် Buyer Power (၀ယ်လိုအား က များမယ်) သို့သော်လည်း Seller Power (ရောင်းလိုအား နည်းတာကြောင့်) လုပ်ငန်းတွေဟာ လုပ်သလောက်အောင်မြင်ဖို့ (%) ပိုများပါတယ်။... More
Leadership Ability - ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်းများ
လုပ်ငန်းတခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကို ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့အရည်အချင်းဟာ အဓိကပါပဲ။ (Alibaba ကို ထူထောင်သူ Jack Ma) ၊ (Apple ကို ထောင်သူ Steve Job) ၊ (Microsoft ကို ထူထောင်သူ Bill Gates) နှင့် (Facebook ကို ထူထောင်သူ Mark Zuckerberg) တို့ရဲ့ အရည်အချင်းအားသာချက်ကြောင့်သာ ထိုလုပ်ငန... More